Sidan ayey Apple u ilaalisay sirta barnaamijkeeda WWDC 2021 | Wararka IPhone
Tani waa sida Apple u ilaalisay sirta barnaamijkeeda WWDC 2021
Wax soo saarka waaweyn oo daadanaya iyo tufaax software waxay ka mid yihiin qodobbada daciifka ah ee shirkadda. Kaliya Apple maahan dhibaato laakiin dhamaan shirkadaha leh wax soo saarkooda hoos imaad sir sare ah si looga fogaado inay soo baxaan nooc kasta oo ay yihiin. Nooc buuxa oo ka mid ah macruufka 'iOS 14' ayaa soo dusay sanadkii hore kaas oo daaha ka rogay astaamo waaweyn waxaana ugu dambeyn lagu soo bandhigay WWDC Si kastaba ha noqotee, Sannadkan WWDC 2021 waxaan la nimid macluumaad yar oo aan aad ugu yar nahay xagga wararka iOS iyo iPadOS 15. Tani waxay u sabab noqon kartaa nidaam cusub oo ay adeegsatay Apple si loo xakameeyo soo bandhigida wararka iyada oo loo marayo astaamaha marin u helka shaqsiyeed.
Tani waa sida Apple u gaashaamisay macruufka iyo iPadOS 15 ee WWDC 2021
Wiilasha iyo gabdhaha 9to5mac waxay falanqeeyeen koodhka isha ee beta-kii ugu horreeyay ee loogu talagalay horumarinta iOS 15 sida mid kasta oo ka mid ah noocyada ay soo saartay Apple. Si kastaba ha noqotee, waxay heleen gabal aan horay loo arag. Apple-ka weyn wuxuu ku daray aqoonsi gaar ah astaamaha cusub ee iOS iyo iPadOS 15. Taasi waa, xirmo kasta oo muuqaal ama astaamo shaqsiyeed lagu calaamadeeyay aqoonsi lagu marin karo marin xaddidan.
Inaad awood u yeelato inaad soo bandhigto shaqooyinkaas xaddidan waa lagama maarmaan yeelato astaan ​​shaqsiyeed awood u leh furitaanka. Taasi waa, shaqooyinka qaarkood ayaa la furay oo la soo bandhigay markii macruufka uu ogaado in astaanta la isticmaalay ay sax tahay. Sidan oo kale, Apple way awoodaa siiyaan marin u helitaanka qaybo ka mid ah macruufka iyo iPadOS injineerada qaarkood qarinta howlaha kale ee aysan aheyn inay ku shaqeeyaan. Tani waxay si gooni ah uga shaqeysaa howlaha waxayna ka hor istaageysaa qof walba inuu marin u helo dhammaan nidaamka qalliinka cusub.
Marka la eego, tani waxay horeyba uga dhacdaa adduunka iyadoo cusbooneysiin ka socota App Store iyadoo ku xiran nooca macruufka aan haysanno iyo haddii Apple go'aansado inuu cusbooneysiiyo macluumaadkaas iyo in kale. Si kastaba ha noqotee, xaddidaadda muuqaalka ayaa u timid software-ka si ay u sii joogaan iyada oo ujeedadu tahay in lagu ilaaliyo wararka nidaamyada ay ku shaqeeyaan sirta ugu sirta badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tani waa sida Apple u ilaalisay sirta barnaamijkeeda WWDC 2021
Chipolo One Spot, waa bedel aad ufiican AirTags